Wararka - Sida loo doorto mashiinka wax lagu duro ee balaaran oo wanaagsan
Sida loo doorto mashiinka wax lagu duro ee baaxadda weyn
Sababtoo ah mashiinka wax lagu duro ee cirbadeynta ayaa ah aalad ku duraysa balaastikada heerkul-dhiska qaab-dhismeedyo qaabab kala duwan leh si loo xaqiijiyo wax ka sameynta alaabada caagga ah. Mashiinnada wax ku oolka ah ee wax lagu duubo ee baaxad weyn ayaa inta badan isticmaala kuleyliyaha elektromagnetic si ay u gaaraan saamaynta keydinta tamarta, iyo marka la eego isticmaalka korontada iyo keydinta tamarta, beddelaha soo noqnoqda ayaa loo xushay inuu beddelo inta jeer ee awoodda hawlgalka qalabka. Tani waxay gaari doontaa kalsooni ka sii wanaagsan waxayna gaari doontaa kalsooni weyn waxqabadka wanaagsan, marka waxaan u baahanahay inaan sameyno xulashooyin wanaagsan oo ku saleysan xaaladda dhabta ah, kalsoonida ayaa si weyn loo horumarin doonaa.
Dabcan, aaladaha keydinta tamarta ee mashiinada wax lagu beero ee baaxad weyn oo tayo wanaagsan leh ayaa lagu ogaadey kuleylka iyo awooda. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la sameeyo xulashooyin kafiican hadba xaalada dhabta ah. Xaqiijinta tayada la gaadhay waxay sidoo kale yeelan doontaa waxqabad aad ufiican, marka waa lagu guuleysan karaa. Kalsoonida ayaa sidoo kale si weyn kor loogu qaadi doonaa. Dooro inaad ogaato in kuleyliyaha elektromagnetic-ga uu badbaadin karo waqtiga kuleylka, si toos ah ugu dhaqmi karo tuubada kuleylka, iyo lakabka dahaadhka gaarka ah wuxuu hagaajin karaa wax kuleylka kuleylka, halka kuleylka kuleylku uu sareeyo, iwm, kuwaas oo ah sababaha lagu hubinayo keyd badan oo tamar ah. Waqtigii hore, duufaanta kuleylka ee iska caabinta waxay lahaayeen waxtar yar iyo kuleyl badan, sidaa darteed waxay ahaayeen kuwo koronto badan. Sidaa darteed, kharashka ka baaraandegidda alaabada caagga ah ayaa si weyn kor loogu qaaday.
Waxaan doorannaa mashiinka wax lagu duubo oo ballaaran oo ballaaran si loo gaaro saameyn wanaagsan oo tamar-badbaadin ah. Waxaan kor ku soo sheegnay keydinta tamarta qeybta kululaynta. Hadda waxaan inta badan ka hadlaynaa tamarta keydinta xagga awoodda. Haddii qalabku u baahan yahay oo keliya awoodda 30HZ inta lagu jiro hawlgalka, oo awoodda dhabta ah ee mootada ay ka sii sarreyso, waxay sababi doontaa qashinka tamarta. Ka dib dooro beddelaha soo noqnoqda si aad u hagaajiso si loo hubiyo inta qalabku u baahan yahay. Soosaarka korontadu wuxuu kuxiranyahay inta awood soosaarka ah, marka saameynta keydinta tamarta ee la gaari karo waa hubaal inay wanaagsan tahay, marka kalsoonida la qabtay ayaa kafiicnaan doonta.
Sax Wax taaj oo kale duritaanka caaga, Mashiinka wax taaj oo kale duritaanka Dhuuban, Wax taaj oo kale duritaanka sax, Sax Wax taaj oo kale Inc., Cirbadeynta saxda ah, Saxsanaanta wax taaj oo kale,